Oonodoli bezesondo be-MILF | Unodoli weSexual oqolileyo njengoBomi eUrdolls
Oonodoli abaBaqolileyo abaPhezulu kunye neMilf Sex ngexabiso elingcono
Yonwabele ingqokelela yethu ngoonodoli abakhulileyo abanexabiso eliphantsi. Oonodoli bezesondo be-MILF bokwenene balelona nqanaba liphezulu nelidumileyo kwihlabathi ubomi oonodoli Milf sex kuba bamele oomama abangatshatanga abashushu abanomfanekiso ogobileyo, umfundisi-ntsapho, umphathi weofisi obhinqileyo njalo njalo. Basenokubonakala beneminyaka ephakathi, okanye badala, nangona kunjalo, ulusu lwabo kunye nemizimba yabo igcinwe kakuhle.
Amanqatha amancinci amaLembe ama-TPE amaDolls amakhulu amabele angama-150CM omeleleyo u-Edwina Lawson
I-170CM D yeNdebe ye-Elastic Ass TPE yeDoll eSondo uMarcia Austin
Amanqatha eSinqe esincinci esinqeni samafutha e-TPE Doll Big Breast Interrogator 150CM Pamela Spender
Amehlo aluhlaza Imilenze emide Imilenze 163CM yeFat Hip Big Amabele amabele iChasel Edison TPE yabantu abadala
Elona Qabane liBalaseleyo laBantu abaDala amaBele amaBele amaXesha amaLungu amaNqatha oLusu u-Selena Lucia 163CM sex Doll
Amabhinqa ama-Big Big amabele eSondo abantu abadala abaDala uDoreen Pullman
Amabele amnandi athambileyo iBlanche 148CM TPE unodoli F ikomityi Amehlo amnyama aqaqambileyo
Ingqokelela yoonodoli besondo be-MILF ifikile
Umgca weUrdolls we Oonodoli bezesondo be-MILF ifikile: ukuba uyawathanda amanenekazi amadala ungajongi. Umzi-mveliso woonodoli besondo ufumene i-boom enkulu kwimarike yanamhlanje ngenxa yoxabiso olukhulu kunye nemfuno yezi oonodoli besondo be-silicone ngabantu abangakwaziyo ukuphila ngeengcinga zabo zesini ngokusebenzisa abantu bokwenyani. Oonodoli bezesondo bathandwa kakhulu kule mihla kwaye bamkelwe ngakumbi kuluntu lwanamhlanje. Ngokukodwa ngoku njengoko abenzi boonodoli besondo bephuhlisa oonodoli abanokwenyani, siza kubona oonodoli abafana nobomi besondo kunye nobukrelekrele bokwenziwa kwixesha elizayo, ngethemba lokubenza bafane nomntu. Ishishini liye laqhubeka nophuhliso kunye nokuqhubela phambili, usebenzisa izinto zamva nje ezifana ne-silicone kunye ne-TPE izinto zokuphindaphinda ukuchukumisa kunye nokuziva komntu wokwenene. Olunye uphuhliso lubandakanya ukufumaneka kwezinto ezininzi ongakhetha kuzo, nto leyo ekhokelele kwimarike enkulu apho wonke umthengi anokufumana into ehambelana nezinto azithandayo kunye nezinto azithandayo. Ukwahluka kwishishini loonodoli abadala ngunodoli wesondo we-MILF.
Ukuthengiswa koonodoli be-curvy milf kunye noonodoli bezesondo abaqolileyo
I-MILF sisishunqulelo esithi "Umama Ndingathanda ukuFuck" kwaye ibhekisa kubafazi abaqolileyo abanobuhle obungaqondakaliyo kunye neemvakalelo ezingenakuphikiswa. Umtsalane ngabasetyhini abaqolileyo uye waphumelela ukususela kwixesha elidlulileyo, kwaye akumangalisi ukuba imboni yoonodoli bezesondo ivelisa oonodoli abafana nobomi obufana nobomi njengoko kufunwa ngokucacileyo. Abasetyhini abaqolileyo abajongwa nje ukuba bahle kwaye bakhule kakuhle ngokwasemzimbeni nasemzimbeni, kodwa banamava kakhulu kubugcisa besini, kunye noonodoli besini banokuzisa iingenelo ezininzi kumadoda okanye abasetyhini abangatshatanga kunye nezibini. Abasetyhini abaninzi bathenga oonodoli bezesondo ukuze bafote, bahombise okanye benze isitayile, abanye abathengi banamaqabane kodwa bakwasebenzisa oonodoli bezesondo njengendlela yokuzama ukucinga ngaphandle kokwenzakalisa esinye isiqingatha, sikwabona izibini zisebenzisa oonodoli bezesondo be-silicone ngokwenyani okanye oonodoli bothando ukuze baqhole. umtshato wabo. Kuyinto eqhelekileyo ukuba ne Unodoli wesini waseJapan kwaye uphuhlise ubudlelwane obukhethekileyo kunye naye. Baqolileyo idoli yabasetyhini bayazi into abayenzayo ukukhokela amaqabane abo ngamaxesha anzima. Iindlela ezininzi zenyama zichaneke kakhulu. Ke ngoko, oonodoli bethu bokuqala bezesondo benzelwe ukuba bajongeke njenge-MILFs ngandlela zonke.
Umdla nge Oonodoli bezesondo be-MILF zivela kumzimba otyebileyo kunye neempawu zenyama, ezikuvumela ukuba uzibambe kwaye wonwabele iigophe kunye nenyama yazo xa usabelana ngesondo esishushu kunye neqabane lakho likanodoli we-silicone. Akunto ingaqhelekanga ukuba mtsha yaye ube mhle, kodwa ukwaluphala njengewayini ecikizekileyo, kuseyinto engenakuthintelwa xa sele ukhulile, kodwa kunqabile yaye kuyancomeka. Ii-MILFs aziqhelekanga kubomi bemihla ngemihla kwaye zinokubandakanya umama womhlobo wakho osenyongweni oshushu, utitshala wasekholejini okanye umphathi weofisi osanxibe iziketi ezibukekayo kunye neehempe ezicakeke ngokunzulu ezikwenza ube zasendle. I-fantasy yokukwazi ukulala kunye ne-cougar ixhaphakile kwaye unodoli wesondo ovuthiweyo ubonelela ngaloo mava, kungekhona nje ukuba uya kunyanzeliswa ngobuhle bakhe, kodwa ubuthathaka bemilenze yakho kwinjabulo yesini buya kubangelwa ukulala naye. .
Kwilizwe lonxibelelwano laseJapan laseAsia, abasetyhini abaqolileyo babhekisa kubafazi abaphakathi kweminyaka engama-30 kunye nama-50 ubudala, abamele ukuzimela, ukuzithemba, ukufunda, ukuhambelana, ukonwaba, ubuhle, isidima, icala elingalawulekiyo kunye nabasetyhini abakhulu. Aba bafazi abashukumi kwiimeko ezingathandekiyo kwaye bayakwazi ukujongana nale meko ngobuchule kunye nokuzola ngenxa yokuzithemba kwabo okukhulu kunye nobuntu obuzimeleyo. Oonodoli besondo abaqolileyo bayafana nezi mpawu zabasetyhini abaqolileyo bokwenyani, njengomzimba otyebileyo, kodwa oonodoli abaqolileyo baya kumamela ngokungenamiqathango kuzo zonke izimvo zakho kwaye ngamanye amaxesha bakunike inkathalo nothando olukufaneleyo xa ubafuna kakhulu.
Yonwabela ingqokelela yethu yoonodoli abagqibeleleyo bezesondo zabantu abadala kunye ne-sexy milfs
Kubaluleke kakhulu ukukhetha umthengisi othembekileyo kwaye iimveliso zakhe zikhuselekile ukuchukumisa ulusu lwakho olungenanto. Ke ngoko, kuya kufuneka ukhethe umntu onamava abanzi kwishishini kwaye akubonelele ngeemveliso ezenziwe ngemathiriyeli ekrwada yamva nje neyinyumba. Isidingo semfezeko sikwabalulekile xa uthenga ezi dolls zesini, hleze ufune ukuthenga into engabonakali yendalo kwaye icinywe lutyalo-mali lwakho. Ngoko soloko ukhetha umthengisi onika ingqalelo kwiinkcukacha kwaye unikezela kuwe oonodoli abathandanayo ezikhangeleka kanye njengabafazi bokwenyani. Ukuba ujonge ezona zibalaseleyo kwishishini ngezi ndlela zingasentla, i-urdolls yindawo yakho yokuphupha.
Sikhuthaza ukusebenzisa oonodoli bezesondo bokwenyani kwaye sifuna ukukuzisela eyona silicone kwaye TPE iidoli ezintandathu ukwenza amaphupha akho abe yinyaniso. Ukuba ukhangela unodoli wothando wokwenyani, jonga ingqokelela yethu, kwaye ukuba awuyifumani le nto uyikhangelayo, sazise kwaye siza kukunceda ufumane loo nodoli wamaphupha.
yethu MILF Sex Doll Ngenxa yamava akhe amaninzi kunye nolwazi, abafazi abaqolileyo bayakwazi ukwenza izikhundla ezahlukeneyo zesini ngokulula, ngoko ke kubalulekile ukuba iqabane eliqolileyo le-silicone libe bhetyebhetye ngokulinganayo ekwenzeni ezi zikhundla zesondo ezintsonkothileyo ngokulula Ewe, kanye njenge-MILF yokwenene. . Amalungu akumgangatho ophezulu kunye namathambo asetyenziswa koonodoli bethu bothando baqinisekisa ukuba sikwenza ube ngumntu omdala opheleleyo onokuthi ubekwe nangayiphi na indlela ofuna ukufumana okuninzi kulonwabo lwakho.
Ungafumana abanye oonodoli bethu bezesondo apha: oonodoli be-silicone ngesondo, oonodoli bothando, oonodoli bokwenyani, oonodoli besini besilisa, oonodoli besini be-anime, oonodoli bezesondo baseJapan
Iimpawu esizingca ngazo: Iidola zeWM, Unodoli weIrontech, DHDOLL, SE Doll